Kani waa duubista cusub ee xiisaha leh ee filimka "Shimbiraha careysan" Wararka IPhone
Kani waa duubista xiisaha leh ee filimka "Shimbiraha careysan"
Ciyaarta ugu caansan ee loogu talagalay barnaamijyada moobiilka, "Shimbiraha Xanaaqsan", ayaa soo maray sannado adag. Bilihii la soo dhaafay, horumariye Rovio waxaa lagu qasbay inuu ceyriyo boqolaal shaqaale ah, maadaama iibka cinwaanku uu hoos u dhacay caalamka isla markaana ciyaaro cusub oo uu sii daayay Rovio aysan gaarin guushii laga filayay. Laakiin rajo ayaa ka jirta shirkadda iyo tan rajo ayaa ka soo muuqan doonta qaab filim, oo ay soo saartay shirkadda Sony.
Shirkadda wax soo saarku waxay daabacday toddobaadkan a trailer cusub ee filimka «Angry Birds», kaasoo sanadkaan laga sii deyn doono tiyaatarada adduunka. Waxay ahayd caqabad weyn in lala qabsado ciyaartan shaashadda weyn, laakiin waa inaan dhahnaa, ka dib markaan aragnay sawirrada filimka, inay nooga tageen dhadhan fiican oo afkeenna ah oo aan dooneyno wax badan. Laba maalmood gudahood, in ka badan saddex milyan oo qof ayaa ku arkay filimkan rasmiga ah YouTube-ka.
Dhexdeeda ayaan kula kulannaa «Shimbir xanaaqsan» halyeyga tacaburka iyo doorka ay doofaarrada sharka ahi ka ciyaaraan dhagarta. Qodobbada majaajillada ah waxay ku qulqulayaan trailer-ka oo dhan, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa in "Shimbiraha careysan" ay markale qosol ka soo saari doonaan dhammaan noocyada dhagaystayaasha.
Filimku wuxuu la kulmay dib u dhac qaarna waxay u haystaan ​​inuu soo daahay, laakiin waxaa laga yaabaa inuu gacan ka geysto kor u qaadida iibinta cayaaraha "shimbiraha careysan" markale. Noqo lagu sii daayay 3D 20dii Maajo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kani waa duubista xiisaha leh ee filimka "Shimbiraha careysan"
Adeegsiga Siri si aad udaariso / u darto xulashooyinka